Mareykanka oo ku baaqay in la kala diro ciidamada gaarka ah ee Maxamed Bin Salmaan - Radio Risaala: Somali News Online
Guddoomiye Aqalka Sare oo kasoo horjeestay Go’aankii Golaha Shacabka kuna eedeeyay...
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa sheegay in xeerkii uu Golaha shacabka ee Aqalka Hoose ku ansixiyay muddo kordhinta...
Home Caalamka Mareykanka oo ku baaqay in la kala diro ciidamada gaarka ah ee...
Mareykanka ayaa ugu baaqay Sacuudi Carabiya inay kala dirto ciidamo si gaar ah u tababaran oo uu maamulo dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan.
Jimcihii lasoo dhaafay ayay aheyd markii sirdoonka Mareykanka ay soo saareen warbixin sheegeysa in Maxamed Bin Salmaan uu ansixiyay dilkii loo geystay weriyihii Sucuudiga u dhashay Jamaal Khaashuqji.
Xukuumadda Biden waxaa lagu dhaleeceeyay arrinta ku saabsan in wax cunaqabateyn uusan kusoo rogin dhaxal sugaha.
Afahayeen u hadlay wasaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu doonayo in Sucuudiga uu kala diro ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ka amar qaata Maxamed Bin Salmaan isla markaana la joojiyo howlgallada ka dhanka ah mucaaradka.
Wuxuu intaas ku daray in cunaqabateyn lagu soo rogay kalkaaliyaasha dhaxal sugaha iyo ciidamadiisa gaarka ah.
Previous articleDowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab